Shacabka Tigareeda oo Loogu baaqay in au Hubka qaataan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Shacabka Tigareeda oo Loogu baaqay in au Hubka qaataan
Gobolka Tigrey ee dalka Itoobiya waxaa ka taagan xaalad adag oo ka dhalatay dagaalka u dhaxeeya ciidamada milatariga dowlada federaalka Itoobiya iyo xoogag taabacsan dowlad deegaanka Tigrey.
Dagaalka socda ayaa dhaliyay khasaaro aad u badan oo soo gaaray ciidamada dagaalamaya iyo waliba dad shacab ah, waxaana jirta cabsi laga qabo in xaalada kasii darto ayna dhacaan dagaalo kuwii hore ka culus.
Xukuumada Maamulka Tigrey ayaa shacabka Tigrey ugu baaqday in guryaha kasoo baxaan ayna qaataan hubka si ay isaga difaacaan duulaanka xoogan ee uga imaanaya ciidamada dowlada federaalka Itoobiya.
Shacabka Tigrey gaar ahaan dhalinyarada ayaa bilaabay in ay hubka qaataan iskuna diyaariyaan dagaal, waxaana wararku sheegayaan in maamulka Tigrey bilaabay in uu dhalinyarada dagaalami karta uu hubeeyo.
Dagaalka u dhaxeeya dowlada federaalka Itoobiya iyo maamulka Tigrey ayaa qarxay kadib markii Ra’isul Wasaare Abiy Axmed uu amray howlgal milatari oo looga jabaabayay weerar xoogag Tigrey ku qaadeen saldhig ciidamada Federaalka ku lahaayeen deegaanka Tigrey.
Previous articleSoomaaliya iyo midowga Yurub oo Heshiis kala saxiizday
Next articleWasiir ka bad baaday dil Juubaland
Musharaxiinta shirka uga socday Muqdisho gaar ahaan xubnaha ka soo jeeda deegaanada Galmudug ayaa markii uu soo dhammaaday wajiga labaad ee shirka uga socday...
Halkaan Ka Daawo Taageerada Ay u sameyeen Hirshabeele Mushara x...